MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA CUNSURKA EYGA ADHIJIRKA AH EE INGIRIISIGA - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Cunsurka Eyga Adhijirka ah ee Ingiriisiga
Axl oo ah Adhijirka Ingiriisiga labka ah ee jira 3 sano— Isagu waa hyperactive markii uu ma helo jimicsi ku filan , wuxuu jecel yahay dhuujinta, si fudud loo tababaray, cajaa'ib leh carruurta iyo xoolaha kale , oo wuxuu ubaahan yahay fiiro gaar ah oo milkiilahiisa ah wuxuuna doonayaa inuu ka farxiyo. ”
Qaabkii Hore ee Collie
ING-xoolo adhi ah
Adhijirka Ingiriisku waa mid firfircoon, caqli badan, firfircoon, firfircoon, geesinimo leh Uma baqo ujeedkeeda. Si dhakhso leh u hawlgal markii la amro aad u jawaaba codka sayidka. La qabsashada naftooda ku dhowaad hal mar amarrada shaqada ee hareeraha keydka beeraha. Astaamaha shaqada waxaa ka mid ah: ciribtir adag oo aad u hooseeya oo adeegsiga ilkahooda. Sidoo kale aad u ilaaliya ilaalada guriga. La shaqeyn kara sayidkooda. Ugu horreyn eey keyd ah, Adhijirka Ingiriisiga sidoo kale dhaqan ahaan waxaa loo adeegsaday ugaarsiga iyo waardiye ahaan marka lagu daro inuu yahay xayawaanka qoyska. Muddooyinkii u dambeeyay waxaa jiray xiiso sii kordheysa oo ku saabsan Shepherd-ka Ingiriiska oo ah cayaaryahanno loogu talagalay dhacdooyinka tartanka sida firfircoonida, Flyball iyo Frisbee. Shakhsiyaadka qaarkood ayaa laga yaabaa inay ku fiicnaadaan dhammaan howlahaas, laakiin badankood waxay yeelan doonaan xoog iyo daciifnimo hal ama ujeeddo kale. Cajiib ah oo leh carruurta oo aan guud ahaan eeyga ku xadgudbin eeyaha kale, way ku fiican yihiin xayawaannada kale haddii lala soo koriyo eeyaha. Guud ahaan eeyaha saaxiibtinimada leh, si kastaba ha noqotee waxaa lagu keydin karaa shisheeyaha. Waxay sameeyaan ilaaliyaal cajaa’ib leh, iyagoo ku baraarujinaya milkiilaha shisheeyaha ku soo dhowaanaya. Adhijirka Ingiriisiga ah wuxuu u baahan yahay shirkad adag, laakiin deggan, kalsooni leh, iswaafaqsan hogaamiyaha xirmada si loo noqdo maskax ahaan deggan .
Dhererka: 18 - 23 inji (46 - 58 cm)
Miisaanka: Ragga 45 - 60 rodol (21 - 28 kg) Dumarka 40 - 50 rodol 18 - 23 kg)
Hip iyo xusulka dysplasia ayaa laga helay noocyada Ingiriis Shepherd iyo sidoo kale ku dhowaad nooc kasta oo kale. Sababtaas awgeed, waa dantaada ugu fiican inaad ka dooratid eey ka soocda waalidiinta oo lagu qiimeeyay da'da 2 sano ama ka weyn oo ay caddeeyeen OFA ama GDC inay ka madax bannaan yihiin sinta dysplasia iyo xusulka dysplasia. Qaar ka mid ah eeyaha dhaqda waxay wataan hiddo-wadaha MDR1 oo ka dhigaya kuwo u nugul daroogada qaarkood oo haddii kale okay la siin karo eey kale, laakiin haddii lagu baaro hidda-wadahan wuu dili karaa.
Noocan laguma talinayo nolosha guriga. Waxay dhex dhexaad ka yihiin gudaha waxayna ku fiicnaan doonaan ugu yaraan daarad weyn.
4 bilood oo buluug ah sanka bulxan
Noocan ayaa loo baahan yahay in la qaato socod maalinle ah ama orod.
5 - 8 eyyo, isku celcelis 6
Koodhku waa fududahay in la carfiyo oo wuxuu u baahan yahay fiiro yar. Ku caday marmar burush adag oo maydh markii loo baahdo oo keliya. Noocani waa celcelis daadiya.
Sida laga soo xigtay halyeeyga, Adhijirka Ingiriisiga ah waa ku dhowaad saafi ah ido iyo lo 'Roman, oo markii hore Kaysar keenay British Isles markii uu ku soo duulay 55 BC. Wuxuu u adeegsaday eeyahaas xoolahii la keenay inay quudiyaan ciidamadiisa. Markii ay xoolihii dhammaadeen, eeyo siyaado ah ayaa jidka looga tegey, waxaana adeegsaday dadka deegaanka u dhashay oo waxay la dhexgaleen noocyada eyda jira ee leh 'taqaan' xoolo 'la mid ah, si loo xoojiyo dareenkaas. Adhijirka Ingiriisiga waxaa keenay gumeysigii Mareykanka qaar ka mid ah dadkii ugu horreeyay ee degay wuxuuna la socday horumarka Mareykanka bari ilaa galbeed. Noocani ujeedooyin badan ayaa si heer sare ah loo qiimeeyay maadaama loo isticmaali jiray xoolo qiimo leh iyo in la ilaaliyo guryaha go'doonsan. Naadiga 'United Kennel Club' waa diiwaan-hayaha asalka ah ee Adhijirka Ingiriisiga wuxuuna aqoonsaday tan iyo 1934.
Axl oo ah Adhijirka Ingiriisiga ah ee lab ah ee jira 4 sano
Axl lab Ingiriis Shepherd sida eey
Ingiriis Shepherds-ka labka midab leh waa Roper oo 6 sano jir ah, sable mugana waa Boots 5 sano ah
Kabaha iyada qashin yar oo eeyo ah
'Kani waa burcad, oo ah 4 bilood jir Ingiriis Shepherd eey ah. Waxaan ku nool nahay magaalada, laakiin waxaan leenahay digaag gadaal ah, oo gorgorku dilay mid ka mid ah, sidaas darteed waxaan u helnay Burcad si ay u daryeesho. Intaas waxaa sii dheer, wuxuu ka cararayaa dabagaallada beertayada, sidaas darteed wuxuu ku mashquulsan yahay mashquul.
Eeg tusaalooyin badan oo ah Adhijirka Ingiriisiga ah
Sawirada Adhijirka Ingiriisiga 1
tilmaamaha gaaban ee jarmalka jarmalka
chihuahua oo lagu qasi jiray eyga weenie
chihuahua qasan muqisho yorkie
eeyaha ka bilaabma l
waa maxay af madow cur ey